ULeopoldo Panero. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. Eminye imibongo | Uncwadi lwangoku
ULeopoldo Panero Wazalelwa e-Astorga, eLeón, ngo-Agasti 27, 1909. Wafunda eValladolid kwaye apho wakhanyisela italente yemibongo yakhe, apho wazama khona ngevesi yasimahla, i Dadaismkunye Ukuziqhelanisa.
Umsebenzi wakhe ubandakanya izihloko ezinje Igumbi elingenanto, iivesi ze-Guadarrama, ezibhalwe ngalo lonke ixesha o Ingoma yobuqu. Kwaye okukhunjulwa kakhulu UCandida. Phakathi kwezinye izinto, waphumelela iMbasa yeSizwe yoNcwadi ngo-1949. Olu lukhetho lwemibongo yakhe. Ukukhumbula okanye ukufumanisa.
1 Leopoldo Panero - Imibongo
1.1 Ngoncumo lwakho
1.2 Ukuhamba ukusuka eSpain
1.3 Unyana wam
1.4 Izandla ezingaboniyo
1.5 Umcimbi ongafihliyo
1.7 Kuluxolo lwentliziyo olunamaphiko ...
Leopoldo Panero - Imibongo
Uncumo lwakho luqala,
Nesandi semvula esiya kwiifestile.
Emva kwemini kuyangcangcazela emazantsi okutsha,
Kwavela ivumba elimnandi emhlabeni.
ivumba elifana noncumo lwakho,
Yisa uncumo lwakho njengomnyevane
kunye ne-aura ka-Epreli; iibrashi zemvula
ngokungacacanga imbonakalo yomhlaba,
kwaye uncumo lwakho lulahlekile ngaphakathi,
ngaphakathi kwaye iyacinywa kwaye ingenziwa,
kwaye kumphefumlo undithatha,
ndothukile, ecaleni kwakho.
Uncumo lwakho sele lutshisa phakathi kwemilebe yam,
kwaye ndinuka kuyo ndingumhlaba ococekileyo,
sele kukhanya, sele kucocekile emva kwemini
apho ilanga likhanya kwakhona, kunye ne-iris,
ishukunyiswe kancinane ngumoya,
kufana nokuncuma kwakho okuphelayo
ishiya ubuhle bayo phakathi kwemithi ...
Ukuhamba ukusuka eSpain
Ndisela ekukhanyeni, kwaye ngaphakathi
Uthando lwam olushushu, umhlaba wedwa
ozinikela ezinyaweni zam njengamaza
bobuhle obuqaqambileyo. Ndingena emphefumlweni wam;
Nditshonisa amehlo am kwiziko lokuhlala
yenceba ethi ngaphandle kwemida inyibilike
ngokufanayo nomama. Kwaye ukhazimla
isithunzi seplanethi indibano yethu.
Emva kolwandle olucocekileyo i-steppe iyakhula,
Iliwa elimnyama, kunye nomsinga
emazantsi entlambo ngesiquphe
omisa intliziyo kwaye ayenze mnyama,
njengokwehla kwexesha esele kugqityiwe
ukuba kuye uThixo kuvela indlela yakhe.
Ukusuka elunxwemeni lwam oludala, kukholo endiziva ngalo,
ekukhanyeni kokuqala okuthatyathwa ngumphefumlo ococekileyo,
Ndihamba nawe, nyana wam, indlela ecothayo
olu luthando lukhula kum njengobulali.
Ndiyahamba nawe, nyana wam, uyozela
Yenyama yam, ilizwi lobunzulu bam bokuthula,
umculo obethwa ngumntu andazi ukuba uphi, emoyeni,
Andazi apho, nyana wam, ukusuka kunxweme lwam olumnyama.
Ndiyahamba, undithathe, ukujonga kwam kuya kuthembeka,
undityhale kancinci (ndiphantse ndeva ingqele);
Undimemela kwisithunzi esitshona ngonyawo lwam,
Undirhuqa ngesandla ... Kwaye ekungazini kwakho ndiyathemba,
Sele ndilulahlile uthando lwakho ndingashiyanga nto,
unesithukuthezi kakhulu, andazi apho, nyana wam.
Ukungahoyi ubomi bam
ibethwe kukukhanya kweenkwenkwezi,
xa uhamba, izandla emthunzini,
wonke, Kristu wam,
yonke intliziyo yam, ngaphandle kokunciphisa, epheleleyo,
virginal kwaye uqhubeke, uphumle
kubomi bexesha elizayo, njengomthi
uphumla entlokweni yakhe, emondlayo,
kwaye iyenza idubule kwaye ibe luhlaza.
Yonke intliziyo yam, ukuxhamla komntu,
ayisebenzi ngaphandle kothando lwakho, ngaphandle kwakho ungenanto,
Ndiva ngathi ukufuna, njengendoda eyimfama,
eyolula xa uhamba ngezandla ezizeleyo
ibanzi kwaye iyavuya.
Kwakhona njengamaphupha intliziyo yam iyabetha
Yokuba uphile… Owu umcimbi opholileyo ongafihliyo!
Kwakhona njengoko ndiziva uThixo emathunjini am.
Kodwa esifubeni sam ngoku linxano ebelingumthombo.
Ekuseni ukukhanya kwentaba kuyacima
cwilisa imingxunya eluhlaza okwesibhakabhaka ...
Kwakhona le ndawo yaseSpain ifana namaphupha,
Eli phunga lekhephu livakalelwa yimemori yam!
Yinto emsulwa nebala, apho amabanjwa,
kanye njengeentyatyambo kwiqabaka, sihlala
Ngenye imini, apho kwisithunzi samahlathi ashinyeneyo
apho iziqu zizalwa khona xa siphila sikrazula!
Owu intwasahlobo emnandi egqitha emathanjeni am
kwakhona njengasemaphupheni ...! Kwaye kwakhona savuka.
Nkosi, ilogo endala iyawa,
uthando olomeleleyo oluzelwe kancinci kancinci,
ikhefu. Intliziyo, isidenge,
ukhala yedwa ngelizwi eliphantsi,
yomboko omdala owenza ibhokisi engalunganga
Uyafa. Nkosi, ndichukumisa i-oki emathanjeni
undone phakathi kwezandla zam, kwaye ndiyakucela
ebudaleni obungcwele obuqhekekileyo
amandla akhe ahloniphekileyo. Isebe ngalinye, ngeqhina,
kwakungobuzalwana bobusi kunye konke kunye
banike umthunzi owonwabileyo, amanxweme amahle.
Nkosi, izembe libiza umthi osisimumu,
ukuvuthela ngokubetha, kwaye uzaliswe yimibuzo
intliziyo yomntu apho uvakala khona.
Kuluxolo lwentliziyo olunamaphiko ...
Kuluxolo lwentliziyo olunamaphiko
ubume beCastile buphumle,
kunye nokuhamba kwelifu ngaphandle konxweme
ithafa eliluhlaza okwesibhakabhaka ngokuthozamileyo.
Kuphela kukukhanya kunye nembonakalo ehleliyo
ukusuka kumhlaba oshushu otyheli
kunye nohlaza lom-oki olunoxolo.
Yitsho ngolwimi ithamsanqa
yobuntwana bethu obabini, mzalwana wam,
kwaye umamele ukuthula okukubizayo!
Umthandazo wokuva emanzini acocekileyo,
ukusebeza okunuka kamnandi ehlotyeni
kwaye iphiko lemingcunube emthunzini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » ULeopoldo Panero. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. Eminye imibongo